Ntughari Uzo Ndi mmadu sitere na UserTesting.com | Martech Zone
Fraịdee, June 7, 2013 Thursday, June 6, 2013 Douglas Karr
Tdekọwapụta na-enye webụsọ ngwangwa ma dịkwa ọnụ ala, nnwale desktọọpụ na ekwentị mkpanaaka na ahịa. Companylọ ọrụ ahụ na-enye ndị na-ere ahịa, ndị njikwa ngwaahịa na ndị na-emepụta UX, na-achọ ịnweta ndị ọrụ na ndị na-ege ha ntị, ndị na-anapụta nzere, vidiyo na nzaghachi ederede na weebụsaịtị ma ọ bụ ngwa na-erughị otu awa. Jiri njirimara weebụ kachasị elu na 10 na US, Tdekọwapụta agbaala ọtụtụ narị puku ule nnwale.
Olee otú UserTesting.com si arụ ọrụ
Tdekọwapụta ugbu a na-enye nnwale nnwale eji emepụtara maka nnukwu ụlọ ọrụ, zuru ezu na ebumnuche dị elu, ịgbasa ndị ọzọ, ntinye ndụ, ule nyocha, usoro ọnụọgụ, yana ọrụ nyocha na ọrụ mkpesa. Tdekọwapụta nwere ndị ahịa 15,000 (gụnyere Home Depot, Sears, Zappos, na Evernote) na ndị ọrụ nnwale 1M +.
Ezubere iche di elu - Site na nzacha igwe mmadụ nke ọma na ihe nlele a na-ahụ anya, UserTesting.com na-enye ụlọ ọrụ ọrụ nzaghachi ndị ọrụ site na ahịa ha zubere.
Gbasaa Mbanye - Site n’inweta ihe karịrị otu nde ndị sonyere, ụlọ ọrụ nwere ike ịgbasawanye iru nnabata ha. Na mgbakwunye, ụlọ ọrụ nwere ike iwe ndị ahịa nke ha, ma ọ bụ kpọlata ndị ọbịa ozugbo na weebụsaịtị ha site na iji ụzọ dị mkparịta ụka na-adị ndụ.
Moderated Ule - Iji hụ na ụlọ ọrụ nwere ike soro ndị ahịa ha na-emekọrịta ihe n'ụzọ dị irè, UserTesting.com na-ejikọ ha na ndị sonyere site na nnwale nnwale ejizi arụ ọrụ, ndị otu elebara anya dị anya, ma ọ bụ nyocha ahịa 1-on-1. UserTesting.com ọbụna nwere ọkachamara moderators dị na ina.
Ọrụ nyocha na ọrụ mkpesa - Iji hụ na ụlọ ọrụ nwere ike iwepu ọrụ ha na-eri oge, njikwa akaụntụ onye ọrụ raara onwe ya nye UserTesting.com na-ewepụta kọmịkalụ, arụ ọrụ nke nghọta nghọta na akara ngosi na akara ngosi akara akara na vidiyo onye ọrụ. UserTesting.com nwekwara ike ịhazi, dee, ma nyekwa ọmụmụ ihe eji eme omenala.
Usoro eji eji ọtụtụ ihe niile arụ ọrụ - Na mgbakwunye na nzaghachi njirimara njirimara siri ike, UserTesting.com ugbu a na-enye data ọnụọgụ, eserese eserese, na akụkọ iji mee ka mkpebi azụmaahịa bụ isi.